फायर ओपल रत्न - नयाँ अपडेट २०२१ - उत्तम भिडियो
फायर ओपल अर्थ। हामी काटिएको वा कच्चा आगो कोपल ढु stone्गा संग झुम्का, औंठी, हार, कंगन वा लटकन को रूप मा सेट कस्टम गहने बनाउन।
अग्निपत्ती एक पारदर्शी देखिन्छ पारदर्शी ओपल, न्यानो र yellowको पहेँलो देखि रातो को शरीर को रंग संग। यद्यपि यसले सामान्यतया र ofको कुनै खेल देखाउँदैन, कहिलेकाँही ढु stone्गाले चहकिलो हरियो चमक देखाउँदछ। सब भन्दा प्रसिद्ध स्रोत को राज्य हो Querétaro मेक्सिकोमा, यी ओपल्सलाई प्राय: मेक्सिकन फायर अप्पलहरू भनिन्छ।
र Rawको खेल नदेखाउने कालो ढु stones्गा कहिलेकाँही जेली ओपल भनेर चिनिन्छ। मेक्सिकन ओपलहरू कहिलेकाँही उनीहरूको राइओलाइटिक होस्ट मटेरियलमा काटिन्छन् यदि यसलाई कटाई र पलि। गर्न अनुमति दिन पर्याप्त गाह्रो छ। यस प्रकारको मेक्सिकन ओपललाई क्यान्टेरा ओपल भनिन्छ। साथै, मेक्सिकोबाट ओपलको एक प्रकार, मेक्सिकन पानी ओपल भनिन्छ, एक रंगहीन ओपल हो जसले या त निलो वा सुनौलो आन्तरिक शीन प्रदर्शन गर्दछ।
मेक्सिकोबाट आगो निभाउने
कालो आगो कोपल
माइक्रोस्कोप मुनि आगो निभाउने
आगोको ओपल भनेको के हो?
के आगो ओपल महँगो छ?
कस्तो प्रकारको चट्टान आगोमा ओपल हो?
ओपल र फायर अपपलमा के भिन्नता छ?
आगोको ओपल कसले लगाउनु पर्छ?
जीरासोल ओपल एक शब्द हो कहिलेकाँही गल्ती र अनुचित तरिकाले कच्चा आगो ओपल ढु stone्गालाई बुझाउन प्रयोग गरिन्छ, साथ साथै मेडागास्करबाट सेमीट्रान्सपेरन्ट प्रकारको मिल्की क्वार्ट्जको एक प्रकारको पारदर्शीको प्रकार जुन एक तारांकन, वा तारा प्रभाव, राम्रोसँग काट्दा देखा पर्दछ। जे होस्, साँचो जीरासोल ओपल हाइलाइट ओपलको एक प्रकार हो जसले एक निलो चमक वा चमक प्रदर्शन गर्दछ जुन वरपरको प्रकाश स्रोत पछ्याउँदछ।
यो र precious्गको खेल होईन जस्तो कि बहुमूल्य ओपलमा देखिएको छ, तर माइक्रोस्कोपिक समावेशहरूबाट एक प्रभाव हो। यसलाई कहिलेकाँही पानी ओपल पनि भनिन्छ, जब यो मेक्सिकोबाट आउँछ। यस प्रकारको ओपलको दुई सबैभन्दा उल्लेखनीय स्थानहरू ओरेगन र मेक्सिको हो।
पेरूको ओपल पनि भनिन्छ निलो ओपल अर्ध-अपारदर्शी पेरुमा पाइने अपारदर्शी निलो-हरियो ढु stone्गा हो जुन प्राय: धेरै अपारदर्शी ढु stones्गामा म्याट्रिक्सलाई काट्न काटिन्छ। यसले र ofको खेल प्रदर्शन गर्दैन। निलो ओपल ओभिएनबाट ओभिए क्षेत्रबाट पनि आउँदछ, साथै अमेरिकाको भर्जिन भ्यालीको वरिपरि नेभाडाबाट।
त्यहाँ कालो फायर ओपल छैन। सबै कालो opals अपारदर्शी हो किन यो एक मूर्खता हो। धेरै व्यक्तिहरू र रत्न व्यापारीहरू (जो रत्नविज्ञानविद्हरू छैनन्) ढु the्गाका नामहरू अलमल्लमा पार्छन् वा ढु name्गालाई गलत नाम दिन्छन्। तिनीहरूले सम्भवत सतहमा रंग घटनाको साथ एक कालो ओपल वर्णन गर्न कोसिस गर्छन्।
यो एउटा रत्न हो जुन मालिकको व्यक्तित्वलाई बाहिर निकाल्ने अर्थ र गुणहरू हुन्छ। नामले देखाउँदछ, यो रत्नले "ज्वाला" लाई दर्शाउँछ र यसमा धेरै शक्तिशाली उर्जा छ।
तपाईं आफ्नो ऊर्जा कुशलतापूर्वक आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यो प्रयोग गर्न राम्रो हुन्छ जब तपाईं आफ्नो सपना वा लक्ष्य महसुस गर्न चाहानुहुन्छ।
पुरानो ज्वालामुखीहरूको गहिराइमा गठन गरिएको, रत्न सिलिकाले भरिएको लाभामा डुबाउँदा यसले आफ्नो सिलहरू र खाली ठाउँहरू भर्दछ। यस अविश्वसनीय गर्मी र दबावमा, लाभाले पानी भित्र फस्छ, यी जादुई, सूर्य-उज्यालो बूढी बनाउँछ।
सब भन्दा बहुमूल्य रंग रातो छ। सुन्तला र पहेंलो थोरै सामान्य र सस्तो हो, तर यी रंगहरू अझै पनि अन्य ओपल र colors्गको तुलनामा सबैभन्दा महँगो हो। जस्तोसुकै र color्ग, यसको गहन रंग, यो त्यति नै मूल्यवान छ।
खनिज विज्ञानमा, यो मणि खनिज होइन, तर एक अनाकार खनिज पदार्थ हो। यसको मतलब यो वास्तवमा एक क्रिस्टल संरचना सच्चा खनिज को रूप मा छैन। सबै अन्य प्रकारको ओपल जस्तै, यो सानो सिलिका क्षेत्रहरूको संचय हो।
ओपल अपारदर्शी छ। आगोको ओपलको झुम्का पारदर्शी देखि पारदर्शी ओपलसँग बनेको हुन्छ, न्यानो र orangeको पहेंलो देखि रातो रंगको। यद्यपि यसले सामान्यतया र ofको कुनै खेल देखाउँदैन, कहिलेकाँही ढु stone्गाले चहकिलो हरियो चमक देखाउँदछ।
राशिफलका साथ जन्म भएको व्यक्तिले वृष र तुला राशिको व्यक्तिले यसलाई लगाउनु पर्छ। यो अत्यधिक कसैलाई सिफारिश गरिएको छ, जसको कुंडलीमा शुक्र शुक्रको महादशा वा अन्तर्दशा छ। ओपल बांझपन, यौन विकार, लिबिडो, र नपुंसकताबाट पीडित व्यक्तिहरूको लागि धेरै फाइदाजनक हुन्छ।
प्राकृतिक पसल हाम्रो पसलमा बिक्री को लागी
हामी काटिएको वा कच्चा आगो कोपल ढु stone्गा को साथ झुम्का, झुम्का, हार, कंगन वा लटकन सेट कस्टम गहने बनाउन ... हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस उद्धरण को लागी।